ပြည်တွင်းစွမ်းအင်သုံးကိရိယာကိရိယာများနှင့်ပတ်သက်သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / ပြည်တွင်းအာဏာရကိရိယာများနှင့်ပတ်သက်သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-09-18 မူလ:ဆိုက်ကို
စက်မှုလယ်ယာကိရိယာအနေဖြင့်လျှပ်စစ်ကိရိယာသည်အလင်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အဆင်ပြေသောသယ်ဆောင်နိုင်မှု၏အားသာချက်များရှိသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးတွင်အကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆုံးအသုံးပြုသော hardware ကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်လယ်ကွင်းအမျိုးမျိုးတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းနိုင်ငံတွင်းPower Tool Industry သည်လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးမှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုပြသခဲ့သည်။ အတွက်Power Tool စျေးကွက်, ပြည်တွင်းစွမ်းအင်သုံးကိရိယာများအရောင်းပမာဏစုစုပေါင်းရောင်းအား၏ 90% သည်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးသည်စျေးကွက်ဝေစု၏ 10% သာရှိသည်။ တွင်နိုင်ငံခြား Power Tool စျေးကွက်,ကျွန်တော့်နိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအချိုးဟာတိုးချဲ့နေပါတယ်။ တရုတ်ကနိုင်ငံခြားဖြစ်လာတယ်Power Tool Production Base,နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကြီးမားသောအလားအလာရှိပါတယ်။ဒီဆောင်းပါးမှာမင်းအတွက်မင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါလိမ့်မယ်ပြည်တွင်းလျှပ်စစ် tooloding စက်မှုလုပ်ငန်းကျိုးပဲ့ရန်လိုအပ်သည့်အဓိက bottlenecks ။
အလို့ငှာလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်ကျွန်တော်တို့၏တိုင်းပြည်၏စွမ်းအင်သုံးကိရိယာများစက်မှုလုပ်ငန်းသည်အောက်ပါ bottlenecks များကိုဖြတ်သန်းရန်အရေးပေါ်ဖြစ်သည်.
1. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဈေးကွက်တွင်အဆင့်မြင့်အဆင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်,ကျွန်တော်တို့၏နိုင်ငံ၏လျှပ်စစ်ကိရိယာထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်နိမ့်ကျပြီးထုတ်ကုန် function သည်တစ်ခုတည်းဖြစ်သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုတွင်ပိုမိုကြီးမားပြီးပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်အတွက်အဆင့်မြင့်စျေးကွက်ဝေစုကိုတိုးချဲ့ရန်အတွက်အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုများကိုပိုမိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
2. အနိမ့် entry ကိုအတားအဆီးကြောင့်ကျွန်တော်တို့၏လွတ်လပ်သောဆန်းသစ်တီထွင်မှု, ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်စိုက်ပျိုးမှုများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာစွမ်းအင်သုံးကိရိယာများသည်နိုင်ငံ၏စွမ်းအင်သုံးကိရိယာများသည်အတော်လေးသေးငယ်ပြီးအသိအမြင်ရှိသည်Power Tool ထုတ်ကုန်များနိုင်ငံတကာစျေးကွက်တွင်လွတ်လပ်သောဉာဏနိုင်ငံ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများနှင့်အတူဝေးကွာသည်။ငါCCERCated Marketing Network ကိုထိထိရောက်ရောက်အတည်မပြုရသေးပါ။ လွတ်လပ်သောဆန်းသစ်တီထွင်မှုစွမ်းရည်များနှင့်အမှတ်တံဆိပ်အသိပညာများကိုပိုမိုအားကောင်းစေရမည်။
3. နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုတင်ပို့မှုသည်ပြင်းထန်သောအခြေအနေနှင့်ကြုံတွေ့ရသောအခြေအနေများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်ထခါး,ဘယ်အကြောင်းရင်းများထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ဆက်လက်မြင့်တက်ရန်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ထုတ်ကုန်များ၏ပို့ကုန်အကျိုးကျေးဇူးကျဆင်းသွားသည်။ ထို့အပြင်, ၏စဉ်ဆက်မပြတ်တန်ဖိုးထားငေွကေြးလုပ်တော်မူပြီပါဝါကိရိယာများတင်ပို့မှုပိုဆိုးတာကပိုဆိုးတယ် ကျော်လွှားရန်အခက်အခဲများစွာရှိနေသေးသည်နိုင်ငံတွင်းပါဝါ Tool သည်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုတင်ပို့မှုတွင်ရလဒ်အသစ်များကိုရရှိလိုသည်။
4. မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကျွန်တော်တို့၏အဖြစ်တိုင်းပြည်၏ status ကို စွမ်းအင်သုံးကိရိယာများကိုအဓိကတင်ပို့သည့်နိုင်ငံများမှဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများကပိုမိုများပြားလာသည်။ အမျိုးသားနည်းပညာနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်ကိုကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိတိုးတက်အောင်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးအလုပ်သမားများနှင့်ကုန်ကြမ်းများကုန်ကျစရိတ်မှာအလွန်နည်းပါးလာသည်ကျွန်တော်တို့၏နိုင်ငံ၏စွမ်းအင်သုံးကိရိယာများwအပြိုင်အဆိုင်ဖိအား,နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြိုင်ဆိုင်မှုသည်ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။
2011 တရုတ်၏အဆိုအရ လျှပ်စစ်သိုလှောင်ရုံမော်တာစျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်သုတေသနအစီရင်ခံစာ \_"ကျွန်တော်တို့၏နိုင်ငံ၏လျှပ်စစ်ကိရိယာစျေးကွက်သည်ရင့်ကျက်လာပြီးအမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သက်ရောက်မှုများသိသာထင်ရှားလိမ့်မည်။ လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းပြည်တွင်းပါဝါကိရိယာများ၏ဝေစုနောက်ထပ်တိုးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ အဖြစ်ပါဝါ tools များအတွက်ဝယ်လိုအားဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီး၎င်းသည်ဆက်စပ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့၏တိုင်းပြည်သည်အဆင်သင့်သော ဦး တည်ရာတစ်ခုတွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအလားအလာကအလားအလာကောင်းများဖြစ်သည်။
ပါဝါ tool ကိုစျေးကွက် ပြည်တွင်းပါဝါစက်ကိရိယာစျေးကွက် ပြည်တွင်းစွမ်းအင်သုံးကိရိယာများရောင်းအားပမာဏ နိုင်ငံခြားစွမ်းအင်သုံးကိရိယာစျေးကွက် ပါဝါ Tool ကိုထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်း ပြည်တွင်းလျှပ်စစ် tooloding စက်မှုလုပ်ငန်း Power Tool ထုတ်ကုန်များ ပါဝါကိရိယာများတင်ပို့မှု ပြည်တွင်းပါဝါကိရိယာများ၏ဝေစု ပါဝါ tools များအတွက်ဝယ်လိုအား